Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wixii ku saabsan macruufka 9 | Wararka IPhone
Wararka IPad | | macruufka 9, iPad
IOS 9 halkan ayey joogeen dhowr saacadood. Bilooyinkan oo dhan, tan iyo markii looga dhawaaqay WWDC bishii Juun, waxaan ka hadleynay wararka ay kujirto, waxaan tijaabinay betas-ka ay Apple billowday, waxaan ku tusnay fiidiyowyo iyo shaashadda shaashadeeda. Laakiin si aan u dhammaystirno caymiskan markii la bilaabay macruufka cusub ee 9 waxaan diyaarinnay maqaal ballaaran jawaabaha su'aalaha inta badan la is weydiiyo.
1 Qalab noocee ah ayaa la taageeraa?
2 Maxaa ku cusub barnaamijyada Apple?
3 Waa maxay astaamaha cusub ee ay ku jirto?
4 Ma jiraan wax war ah oo ku saabsan amniga?
5 Ma jiraan wax looga tago Android ilaa macruufka si fudud?
6 Sidee ayuu cusbooneysiintan u saameyn doonaa batterigeyga?
7 Waa maxay caawimaad firfircoon?
Qalab noocee ah ayaa la taageeraa?
Dhamaan aaladaha ay ku xirnaayeen iOS 8 waxay la jaan qaadayaan macruufka 9. Apple cid ugama tagin buundada markan. Liiska dhameystiran ee moodooyinka lagu cusbooneysiin karo noocyadan waa:
iPhone 4S, 5, 5s, 6, 6 Plus, 6s iyo 6s Plus
iPod Touch 5G iyo 6G
iPad 2, 3, 4, Hawada, Hawada 2, Mini, Mini 2, Mini 3, Mini 4 iyo iPad Pro
Maxaa ku cusub barnaamijyada Apple?
macruufka 9 waxaa ku jiri kara waxyaabo badan oo cusub oo nidaam ahaan ah (oo aan gebi ahaanba run ahayn), laakiin codsiyada asaliga ah ee Apple ay ku jirto asal ahaan ha ku jiraan waxyaabo badan oo cusub:
Khariidadaha ayaa ugu dambayntii waxaa ku jira macluumaad ku saabsan gaadiidka dadweynaha (in kastoo ay hadda ku kooban yihiin magaalooyinka qaarkood).
Passbook mar dambe ma jiro oo hadda waxaa loo yaqaan 'Wallet'
Taagan joornaalku sidoo kale ma jiro oo hadda waxaa loogu yeeraa News (kaliya waddamada qaar xilligan)
Qoraalada ayaa waxbadan hagaajiyay mana ahan codsi qoraal lagu qoro, waxaad galin kartaa xiriiriyeyaal, sawirro, wax ka bedelid ... shaqooyinka ugu caansan ee sameeyaha ereyga marka loo eego barnaamijka Notes ee aan ognahay illaa iyo hadda.
Waa maxay astaamaha cusub ee ay ku jirto?
Siri wuu fiicnaaday, xitaa wuxuu na siin doonaa talooyin adigoon weydiisan. Waxaad ka raadin kartaa sawirro iyo fiidyowyo ku keydsan qalabkaaga taariikhda, goobta, iwm. Waxaad sidoo kale ku raadin kartaa muusikada cinwaan ama farshaxan, waadna ogaan kartaa waxaad sameyneyso waqti kasta si aad ugu dejiso xusuusino howlahaas.
Raadintu aad bay u caqli badan tahay oo hadda waxaan ku haynaa bidixda bidix, iyadoo la siinayo talooyin ku saabsan xiriirada, barnaamijyada, wararka, iwm. iyo sidoo kale waxaan ka raadin karnaa xitaa codsiyada (illaa inta loo cusbooneysiiyey shaqadan)
Shaashado badan oo shaashad ah ayaa ugu dambayntii yimid, in kasta oo kaliya loogu talagalay iPad-ka iyo kaliya moodooyinka qaarkood. Slide Over, Spñlit View iyo PiP waa sedex shaqo oo cusub oo ku soobaxa ipadka isla markaana aan ku sharaxeyno maqaalkan faahfaahin dheeraad ah.
IPad-ka hada wuxuu kumbuyuutarka ku leeyahay "trackpad" shaqadiisa oo dib loo habeeyay, taas oo kuu ogolaaneysa inaad dhex dhex mushaaxdo oo aad si fudud u xulato qoraalka
Ma jiraan wax war ah oo ku saabsan amniga?
Xaqiijinta Laba-tallaabo ah ayaa hadda ah nidaamka amniga ee aasaasiga ah ee iOS 9, taas oo aad uga dhigaysa qof inuu si qaldan u isticmaalo koontadaada. Haddii aadan garaneyn sida saxda ah ee ay u shaqeyso, waxaan kuugu sharaxeynaa gudaha maqaalkan. Sidoo kale waxaa ku jira lambar cusub oo furaya 6-lambar halkii afar ah, sidii hore.
Ma jiraan wax looga tago Android ilaa macruufka si fudud?
Apple waxay leedahay codsi diyaar ah oo la yiraahdo "U dhaqaaq macruufka" taasi waxay fududeyneysaa in laga wareejiyo barnaamijka Google loona wareejiyo Apple. Waxaan kaaga sheegnay iyada gudaha maqaalkan.
Sidee ayuu cusbooneysiintan u saameyn doonaa batterigeyga?
Waa inay saamayn togan ku yeelataa, runtiina Apple waxay hubisaa in iOS 9-ka nolosha batteriga lagu kordhin karo ilaa 1 saac oo dheeraad ah aaladda. Laakiin sidoo kale waa Shirkadda Apple ayaa soo saartay nidaam cusub oo batari lagu keydiyo taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad tuujiso ilaa 3 saacadood oo dheeri ah, adigoo yareynaya processor-ka iyo GPU-ga markii batterigu hooseeyo, iska ilaali wixii cusbooneysiinta asalka ah iyo inaad gebi ahaanba joojiso AirDrop iyo Continuity, tusaale ahaan.
Waa maxay caawimaad firfircoon?
Siri mar dambe uma baahna inay sugto inaad ku weydiiso su'aal si ay kuu caawiso. Waad ogaan kartaa meesha aad joogto, waqtiga maalinta iyo arjiga aad u adeegsanayso sii odoroso codsiyadaada oo aad ogaato waxaad u baahan karto waqtigaas, oo ku siinaya talo soo jeedin ah inaad baran doonto intaad isticmaaleyso macruufka 9. Marka haddii aad isku xirto samaacadahaaga, waxay kuu soo jeedin doontaa codsi muusig oo aad inta badan ku isticmaasho shaashadda qufulka, ama markaad ku xirto gaariga gacanta-bilaash ka ah barnaamijka podcast ee aad isticmaasho intaad shaqada aadeyso. Markaad fuusho gaariga subaxa hore waxay ku muujineysaa shaashadda qufulka inta ay qaadaneyso inaad ku shaqeyso iyadoo kuxiran xaaladaha taraafikada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 9 » Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iOS 9
Waxay umuuqataa qabow, laakiin meel kayar xusuusta xadidan ee aaladaha tufaaxa.
Ku soo jawaab Rafael Terán
maahan inay qaadatay meel aad ugayar IOS 8?